Tamin'ity herinandro ity dia afaka nandany fotoana niaraka tamin'ireo zokiolona mpivarotra avy amin'ny oniversite iray teo an-toerana aho ary nanontany izy ireo hoe inona ny fahaiza-manao fototra azon'izy ireo iasana mba ho tian'ny mpampiasa kokoa. Tena nifanakalo hevitra momba ny Google Analytics aho… mazàna satria fitaovana saro-pantarina izay hitako fa mihamaro ireo orinasa mandray fanapahan-kevitra mahatsiravina. Ny tsy firaharahiana ny sivana, ny hetsika, ny fanentanana, ny tanjona, sns
Alakamisy, Septambra 23, 2021 Alakamisy, Septambra 23, 2021 Douglas Karr
Niasa tamina tranokala mpanjifa WordPress aho nandritra ny herinandro vitsivitsy izay somary be pitsiny. Mampiasa WordPress miaraka amina fampidirana amin'ny ActiveCampaign hikolokoloana fitarihana sy fampidirana Zapier amin'ny Zendesk Sell amin'ny Elementor Forms izy ireo. Rafitra tena tsara… manomboka ny fampielezan-kevitra mitete ho an'ny olona mangataka vaovao ary manosika ny mpitarika ny varotra mety rehefa angatahina. Tena mahavariana ahy ny endrik'i Elementor miovaova ary